Ithegi: ukuthekelisa | Martech Zone
I-iPad: Abafundi beMartech baFumana iinyanga ezi-3 simahla kwiMagazini yeMarketing
NgoMvulo, nge-7 kaJanuwari, 2013 Lwesine, Okthobha 31, 2013 Douglas Karr
Ukuba awufundanga .bizMarketing okwangoku kwi-iPad yakho, lixesha! Sithanda ukuxhasa amanye amajelo akhuthaza ubuchule obukhulu kwaye afundise abathengisi ngeendlela ezifanelekileyo kunye neengcebiso ezizizo. Nyanga nganye, uya kufumana amanqaku avela Martech Zone kwabelwana apho ngokunjalo! Abapapashi bemagazini i-.bizMarketing bandise isibonelelo se-VIP Martech Zone bafundi bafumane iinyanga ezi-3 kude nomrhumo wakho wonyaka! bizMarketing Magazine inikezela ngamashishini akwi-intanethi kunye neengcali zentengiso nge
Ukuba ufumana ithuba, bhalisela ukubhaliselwa kwe-bizMarketing Magazine. Kutshanje baphinde bapapashe inqaku lethu malunga nokukhula kunye nekamva le-SocialTV. Bekumnandi ukusibona kupapasho, kwaye imagazini yedijithali ibigcwele amanqaku amahle kunye nengcebiso ngetoni. I-bizMarketing Magazine inikezela ngamashishini akwi-Intanethi kunye noochwephesha bezentengiso ngeendlela ezahlukeneyo zamanqaku ezenzelwe ukukugcina unolwazi ngezinto zamva nje kwihlabathi eliguqukayo
Emuva kwiBhlogIndiana 2010, senze ukumiliselwa okuthambileyo kwePlaginPress plugin ukunceda ukwandisa imveliso yabasebenzi. Ibizwa ngokuba luLuhlu lokuHlola lweBlogging, kwaye isekwe kumandla alula ngokungakholelekiyo kodwa omangalisayo woluhlu lokutshekisha. Uluhlu lokuBhloga lokuKhangela yile nto ivakala ngathi: yenza inqwaba yeebhokisi zokujonga ukuba uzisebenzise xa ubhala iposti yebhlog. Ngokuqinisekileyo ungafezekisa into efanayo ngoxwebhu lweLizwi okanye ngeposi, kodwa
Inyathelo elinye lokunyusa imveliso yakho ye-imeyile
NgoLwesibini, Septemba 9, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
UConnie unesithuba esihle namhlanje, i-imeyile ayingomsebenzi wam. UConnie ubhekisa kwindawo kaStephen awuyiyo ibhokisi yakho engenayo. UChris Brogan uneendlela ezithile zokuhambisa i-imeyile yakho ngemveliso. Ngamanye amaxesha ndiziva ngathi ndijikeleza nje ivili lesigqibo se-imeyile. Isigqibo sevili nge-imeyile Mhlawumbi ezona ndlela zilula zokwandisa imveliso yakho ye-imeyile zinokufunyanwa nguMark, uMongameli wasePatroni, namhlanje. Uhlengahlengise nje ukuThumela kunye nokufumana useto kuye